साथीको आमा - Nepali Sex Tube
मेरो नाम कपिल हो । म एक २७ बर्षे अबिबाहित युवक हुँ । मेरो घर झापाको बिर्तामोडमा पर्छ । म पढाईको सिलसिलामा काठमाडौमा बिगत ३ बर्षदेखि बस्दै आएको छु । कलेजमा मेरो धेरै साथीहरू छन , जसमा रबिन कोईराला नाम गरेको साथी र म धेरै मिल्ने गर्छौ । म बानेश्वरको एउटा घरमा कोठा भाडा लिएर बसेको छु र रबीनको घर पनि बानेश्वरमा नै पर्छ । मेरो कोठा र रबीनको घर ५ मिनेटको दुरीमा पर्छ । म प्रायः जसो रबीनको घर जाने आउने गर्छु ।
कहिले काँही रबीनको घरमा नै सुत्ने गर्छु । प्रायः परीक्षाको समयमा हामी सँगै बसेर पढ्ने गर्छौ । रबीनको घरमा बुवा, आमा र एक जना दिदी छन । बुवा ब्यापारी भएकोले प्रायः काठमाडौ बाहिर गई रहनु हुन्थ्यो । हप्ताको ४-५ दिन वहाँ काठमाडौ बाहिर नै बस्नु हुन्थ्यो । बुवाको ऊमेर ५० भन्दा माथी नै हुनु पर्छ तर उसको आमा करीब ४० बर्षकी हुनुहुन्थ्यो । एक दिन मैले सोधेको थिए “बुवा र आमाको उमेर किन यती धेरै फरक ?” रबीनले उनकी आफ्नी आमा पहिला नै बित्नु भएको र अहिले आमा सौतेनी आमा हुन भनेर बताएका थिए ।
हाम्रो तेश्रो बर्षको परीक्षा शुरु हुन १ हप्ता बाँकी थियो , म रबीनको घरमा गएर पढ्नलाई बस्न थाले । एक दिन हामी कोठामा बसेर पढीरहेका थियौ , “खाना तयार भयो , तिमीहरू दुबैजना खाना खान आउ चाँडो ” भन्दै आन्टीले किचन बाट बोलाउनु भयो । अनि हामी उठेर खाना खान लाग्यौ । म किचनमा छिरे , साथीको आमाले सारी र चोलो लाउनु भाको थियो । यसो चोलो तिर मेरो आँखा गयो , वहाँको दुधको पोका देखेर मेरो लाँडो ठनक्क भएर आयो । हामी डाईनिङ टेबलमा बस्यौ , आन्टीले खान लिएर आउनु भयो ।
मेरो अगाडी थाल राख्दा वहाँको चोलो छोपेको सारीको भाग झर्यो । हतार हतार वहाँले सारी मिलाउनु भयो । सारी तल झर्दा वहाँको दुधको पोका झनै प्रष्ट देखे , मेरो लाँडो झन ठन्किएर आयो । आन्टीले मलाई छड्के आँखाले हेर्नु भयो , म निहुरेर बसे , वहाँको आखामा एक प्रकारको चमक महसुस गरे । हामी खाना खाई सकेर उठ्यौ अनि हात धोईओरी कोठा तिर पढ्न गयौ । मेरो आँखा अगाडी आन्टीको दुधको पोका मात्रै आईरह्यो , जसले गर्दा म पढ्नै सकिरहेको थिईन ।
धेरै प्रयास गरे तर पढाई तिर मनै गएन , लाँडो ठन्केर खपी नसक्नु भईसकेको थियो । “जे होला होला , एक पटक छोलेरै आउँछु” भन्ने मन मनै सोँचेर बाथरूम तिर लागे । हतार हतार बाथरुममा पसे अनि पेन्ट , कट्टु सबै खोलेर नाङ्गो बने अनि लाँडोलाई खेलाउन थाले । आँखा चिम्म गरे अनि आन्टीको दुधको पोका सम्झिदै च्याप्प लाँडो समातेर मुठी पारे अनि छोल्न थाले । म आफ्नै सुरमा छोल्न थाले , अचानक बाथरूमको ढोका खुलेजस्तो लाग्यो र यसो ढोका तिर हेरेको त आन्टी ढोकामा बसेर मलाई हेरीरहनु भएको थियो ।
म लाजले भुतुक्कै भए अनि हतार हतार लाँडो छोप्न तौलिया बेर्ने प्रयास गरे । हतार गरेकोले होला , घरी तौलिया तल झर्थ्यो त कहिले बटारिएर छोपिनै गाह्रो हुन्थ्यो । तै पनि आफ्नो लाँडो छोप्न म सफल भए । “ओहो , कपिल ….. के गर्दै तिमी ? कमसेकम ढोका त भित्रबाट बन्द गर्नु पर्छ ” आन्टीले भन्नु भयो । “सरी आन्टी , पिसाब फेर्न हतार भएर मैले त ढोकै बन्द गर्न बिर्सेछु , सरी ” मैले लजाउँदै र वास्तविकता लुकाउने प्रयास गर्दै भने । “हो र ? अनि पिसाब फेर्न सबै लुगा खोल्नु पर्छ र ?” आन्टीले जिस्काउँदै भन्नु भयो । म लाजले भुतुक्कै भए र घोप्टो परेर बाहिर निस्कन खोजे । “ल ल , लजाउनु पर्दैन ।
खै यता आउ म तिमीलाई सघाउँछु ” आन्टीले भन्नु भयो । आन्टीको यो कुरा सुनेर म झसँग भए , मलाई कता कता के के भएर आयो । अनि बिस्तारै आन्टी तिर फर्केर हेरे , वहाँले मलाई एकटक लगाएर हेरीरहनु भएको थियो । वहाँको आँखामा एक प्रकारको चमक थियो , जुन चमक मैले खाना खाने बेलामा देखेको थिए । वहाँको आँखामा प्यास देखिन्थ्यो , जुन प्यास शायद म बाट बुझाउन चाहनु हुन्थ्यो । यस्तो लाग्थ्यो वहाँ धेरै दिन देखि भोको हुनुहुन्थ्यो । “किन लजाएको , ढोका रामरी बन्द गर अनि यहाँ आउ” आन्टीले भन्नु भयो र म फेरि ढोका बन्द गरेर आन्टीको छेउमा पुगे । म वहाँको छेउमा पुगेको मात्र के थिए , बाघले शिकार झम्टेको झै गरी वहाँ म माथि झम्टनु भयो र मलाई अंगालोमा हालेर गालामा , निधारमा , आँखामा , मुखमा किस गर्न थाल्नु भयो ।
म अक्क न बक्क परे , के गरौ कसो गरौ भयो । आफुले आफैलाई सम्हाले अनि आन्टीलाई पनि अंगालो हालेर किस गर्न थाले । किस गर्दा गर्दै आन्टीले मेरो लाँडो पेन्ट बाहिरबाटै च्याप्प समाउनु भयो । वहाँको लाँडो समाउने तरीकाले मलाई सिरिङ्ग बनायो र शरीर भरी करेन्ट लागे जस्तै भयो । “खै खोल तिम्रो सबै लुगा , म तिमीलाई सघाउँछु” आन्टीले भन्नु भयो । मैले पनि कुनै संकोच बिना सबै लुगा खोले र वहाँको अगाडी नाङ्गो भए । “ओ हो , तिम्रो लाँडो त गजबको पो रहेछ , यस्तो लाँडोले चिकाउन पाए पो मजा आऊँथ्यो । तिम्रो अंकलको त सानो न सानो छ , त्यस माथी एक छिन पनि कडा हुँदैन , १०-१२ पटक हल्लियो कि लुत्रुक्क पर्छ ” आन्टी उत्सुक हुँदै एक्लै कराउँदै हुनुहुन्थ्यो । म एक बालक झै हेरेको हेरेकै भए , साथै आन्टीको कुरा सुनेर म अवाक बनी बसीरहे ।
आन्टीले च्याप्प मेरो लाँडो समाउनु भयो अनि आफ्नो मुखमा हाल्नु भयो र केटाकेटीहरूले आइसक्रिम खाए झै गरेरे मेरो लाँडो चुस्न थाल्नु भयो । वहाँको यो लाँडो चुसाई मेरो लागि अत्यन्त रोमाञ्चक थियो । शरीर भरी तरङ्ग पैदा भईरहेको थियो । मलाई एक प्रकारको रमाईलो अनुभव भईरहेको थियो , यस्तो आनन्द शायद म पहिलो पटक महसुस गरीरहेको छु । “म हुँदा हुँदै किन आफ्नो हातलाई दुःख दिई रहेको तिमीले , यसो मलाई एक पटक ईशारा गरे हुन्थ्यो नि कपिल” आन्टीले खुशी हुँदै भन्नु भयो । “हुन्छ नि अब देखि भन्छु नि” मैले भने । आन्टी मेरो लाँडो चुस्नमा ब्यस्त हुनुहुन्थ्यो । वहाँ घरी मेरो पुरै लाँडो मुख भित्र छिराउनु हुन्थ्यो त कहिले आफ्नो जीब्रो ले मेरो लाँडोको टुप्पो खेलाउनु हुन्थ्यो ।
कहिले मेरो गेडाहरू मुख भित्र छिराएर चुसे जस्तो गर्नु हुन्थ्यो । जे गर्नुहुन्थ्यो , मलाई अत्यन्तै रमाईलो भईरहेको थियो । करीब १०-१५ मिनेट जति आन्टीले मेरो लाँडो चुस्नु भयो । म ऊभिएको थिए , आन्टी घुँडा टेकेर मेरो लाँडो चुस्दै हुनुहुन्थयो , जसले गर्दा मैले केही गर्न पाईरहेको थिईन । “तपाई उठ्नुन , म पनि तपाईलाई खेलाउँछु ” मैले साहस गरेर भने । “पर्दैन , आज म खेल्छु , तिमी भोलि खेल्नु । आजै सबै सकिहाल्नु पर्छ र , भोलिलाई पनि बाँकी राख्नु परेन ?” आन्टीले जवाफ दिनु भयो । मैले केहि भन्ने आँटै गरिन ।अब भने मलाई गाह्रो भएर आउन थालिसकेको थियो , मेरो लाँडोले माल झार्न लागेको थियो ।
भित्रबाट उकुसमुकुस भएर आयो , कता कता के नै निस्केला झै भयो । “मेरो झर्न लाग्यो आन्टी” मैले भने । “हुन्छ झार झार , मेरो मुख भित्रै झार” आन्टीले मुख आँऽऽ गर्दै भन्नु भयो । मैले पनि वहाँको मुख भित्र सबै माल झारि दिए , आन्टीले मिठो मानेर मेरो सबै माल निल्नु भयो अनि लाँडोलाई पुनः चुस्न थाल्नु भयो । लाग्थ्यो आन्टीलाई मेरो सबै माल पिउन मन थियो र चुसेर सबै माल निलिसक्नु भएको थियो । म शिथिल भईसकेको थिए । जब आन्टीले मेरो सबै माल चुसीसक्नु भयो अनि उठ्दै भन्नु भयो “आज बल्ल गजबको लाँडो चुस्न पाईयो , अब भोलि यो लाँडोले मलाई चिक्नु पर्छ है कपिल ।” मैले “हुन्छ आन्टी , अब भोलि किन , भरै नि चिक्छु नि तपाईलाई म, हुन्न र ?” भने । “भरै नै ? हुन्छ हुन्छ , त्यसो भए भरै खाना खाई सके पछि तिमी आफ्नो कोठमा सुत्न जानु अनि रबिन सुते पछि बिस्तारै उठेर मेरो कोठामा आउनु नि त , अनि मजाले रातभरी चिकौला , हुन्छ ?” आन्टीले भन्नु भयो । “हुन्छ हुन्छ , त्यसो भए भरै मजाले चिकौला ल आन्टी ” मैले भने अनि कपडा लाएर हामी दुबै जना बाथरूमबाट बाहिर निस्कियौ ।
आन्टीलाई रात भरी ४ चोटी चिकियो